विदेशबाट विदामा आएकाहरुले पुन: स्वीकृति लिन के-के पेश गर्नुपर्छ, शुल्क कति ? – Rapti Khabar
वैदेशिक रोजगारमा गएर विदामा आएकाहरुले पुन: सोहि कम्पनी वा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी छंदै सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम रोजगारदाता परिवर्तन गरेर नयाँ कम्पनीमा रोजगारीमा जान सक्दछन् ।
जसको लागि पुन: स्वीकृति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशबाट विदामा आएका धेरै नेपालीहरुले हामीलाई यसको प्रक्रियाबारे सोध्नुभएको छ ।
उद्धारबाहेकका सम्पुर्ण उडानहरु बन्द रहेको अवस्थामा पुन: श्रम स्वीकृति लिएकाहरु कसरी विदेश जान्छन ? भन्ने प्रश्न धेरैलाई छ । यस्तो अवस्थामा पुन: श्रम स्वीकृति पाएका श्रमिकहरु नियमित उडान नखुल्दासम्म चार्टर्ड उडानमा जानुको विकल्प छैन ।
बिभागले पुन: श्रम स्वीकृति दिइरहेका श्रमिक आफै टिकट काटेर जान पर्ने हुन्छ । विदेशमा नेपाली लिन जाने जहाजहरुमा पुन: स्वीकृति लिएकाहरु जान सक्छन् ।